Daawo Neymar Oo Garoonka Tababarka Ku Ceebeeyay Kylian Mbappe & Xiddigaha PSG Oo U Dabaaldegay - Gool24.Net
Daawo Neymar Oo Garoonka Tababarka Ku Ceebeeyay Kylian Mbappe & Xiddigaha PSG Oo U Dabaaldegay
Kooxda hanatay horyaalka Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa ku soo laabatay tababarka iyagoo isku diyaarinaya kulanka wareega sideed dhamaadka Champions League oo ay magaalada Lisbon kula ciyaarayaan kooxda Talyaaniga ee Atalanta.
Xilli ciyaareedka horyaalka Faransiiska ayaa xilli hore la kansalay sababo la xiriira caabuqa Korona sidaasi darteed PSG ayaa waqti badan u heysata inay isku diyaariso tartanka Champions League oo dib u bilaabanaya bisha soo socota.
Tababarkii maanta ayaa noqday mid si weyn loogu wadaagay baraha bulshada iyadoo xiddigaha PSG ay ciyaarayeen dhex ku jir.
Neymar ayaa ku guuleystay inuu kubada ka dhex saaro lugaha Mbappe (tuundheer) taasoo keentay inuu dabaaldego xiddiga reer Brazil oo ku faraxsanaa inuu tuundheer ka saaray xiddiga sida weyn loo qiimeeyo ee Faransiiska.
Neymar ayaa aamini waayay in kubadiisa ay ka dhex baxday lugaha Mbappe, waxaa iyagana la mid ahaa xiddigaha kale ee PSG gaar ahaan Marco Varratti oo la dabaaldegay Neymar.
Xiddiga reer Brazil oo ogsoonaa inay dhif iyo naadir tahay waxa dhacay ayaa soo eegay dhanka kaamiradii duubeysay tababarkooda isagoo dhunkasho u dhaqaaqay, halka xiddigaha kale ee PSG ay ku maadeysanayeen xiddiga Faransiiska.
Caska waaga baryaaya says:
Naymer jr nin jira